Xildhibaan Dalxa”Waa nasiib daro in dowlada ay kala xakameyn weydo ciidamo ay xuquuqdooda bixiso! | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Xildhibaan Dalxa”Waa nasiib daro in dowlada ay kala xakameyn weydo ciidamo ay...
Xildhibaan Dalxa”Waa nasiib daro in dowlada ay kala xakameyn weydo ciidamo ay xuquuqdooda bixiso!
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan Xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlaanka Soomalaiya ayaa ka hadlay dagaal shalay Ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ku dhax maray xerada General Gordan ee Imaaraadka uu tababari jiray ciidamada dowlada.
Xildhibaanka ayaa waxuu ku eedeeyay in ay masuuliyiin ka tirsan dowladda ay ku lug leeyiin isku dhacyadda Ciidamada milatariga ku dhex maray Xerada Jeneraal Golden ee magaaladda Muqdisho oo dhawaan ay la wareegtay dowlada Soomaaliya.
Maxamed Cumar Dalxa ayaa sidoo kale waxaa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in iyadoo dowladdu ay dhawaan la wareegtay ciidadii Imaaraadku uu tababaray sidoo kalana sheegay in Xuquqdooda ay bixineyso Ciidankii ay Kala xakameyn.
Shalay ayaa Ciidamo ka wada tirsan milatariga Soomaaliya waxaa ay ku dagaalameen Xerada Jeneraal golden waxaana Taliyaha Ciidamda Xoogga dalka Soomaaliya uu sheegay in gacanta lagu dhigay Ciidan isku dayay in ay boob ka geystaan Xeradaasi.